China Ibhokisi lephepha lokunakekelwa kwesikhumba lifakwa nge-PVC book type box Manufacturer and Supplier | I-Huaguang
Izipho zangasese Ibhokisi Lesipho
Usayizi: 28 * 17 * 7cm
Ngokuthuthuka nokuvuselelwa kobuchwepheshe nemishini, inqubo yokukhiqiza yokupakisha ibhokisi lesipho iye yenziwa ngamabhizinisi amaningi. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha kuthuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza, futhi imishini emisha iye yathatha isikhundla sokusebenza ngesandla okuyisidina. Ukuthuthukiswa kwesoftware ne-hardware kuthuthukise ikhwalithi yomkhiqizo.
Uhlobo lwebhokisi lesipho lazo zonke izinhlobo, kusukela kumaphoyinti akhomba phezulu naphansi ngenhlanganisela yesembozo nefomu lekhava eyisisekelo, eshumekwe ngokuhlanganiswa kwebhokisi le-cartridge, kukhona ukuvulwa nokuvalwa kohlobo lomnyango, uhlobo lwenhlanganisela eboshwe ngokhuni, lubeke ukwakheka okuyisisekelo kwamabhokisi ezipho, lezi zinhlobo ngesakhiwo sohlaka oluyisisekelo, abaklami benze i-kaleidoscope yohlobo lwebhokisi, ekupakisheni imikhiqizo efakwa egameni elipholile. Namuhla ngaleli bhokisi lephepha lokunakekelwa kwesikhumba ukwethula uhlobo lwebhokisi kuwe:
1. Ibhokisi lohlobo lwencwadi: lakhiwe ngegobolondo langaphandle nebhokisi elingaphakathi. Indandatho yegobolondo yangaphakathi izungeze ibhokisi elingaphakathi, kuthi phansi kwebhokisi elingaphakathi kunamatheliswe odongeni lwangemuva. (bona isithombe)
2.Lid kanye nesisekelo ibhokisi: yakhiwa ikhava ibhokisi nebhokisi phansi, ngokuvamile esetshenziselwa bopha engenhla, aphansi futhi amancane. (bona isithombe)
3.Ibhokisi lomnyango elinamabili: lakhiwe ngebhokisi langaphandle langakwesokunxele nebhokisi langaphandle elingakwesokudla, nebhokisi langaphakathi ohlangothini lwangaphakathi namabhokisi angaphandle angakwesobunxele nangakwesokudla. (bona isithombe)
4. Amabhokisi amise okwenhliziyo: amabhokisi abunjwe njengezinhliziyo, ikakhulukazi ngesakhiwo samabhokisi ezembozo namabhokisi ayisisekelo. (bona isithombe)
5.Ibhokisi lekhava onqenqemeni nangaphansi: Ibhokisi lekhava lakhiwe ngebhokisi lekhava nebhokisi eliphansi. Ibhokisi lekhava nebhokisi elingezansi linosayizi ofanayo. (bona isithombe)
6.Ibhokisi lokudonsa: yibhokisi elinomsebenzi wedilowa. Ingakhishwa futhi ivulwe kalula uma isetshenziswa. (bona isithombe)
7. Ibhokisi lesikhumba: ibhokisi elingenalutho elenziwe ngebhodi lokuminyana elinempahla ye-PU enamathiselwe ngaphandle, ebukeka njengebhokisi lesikhumba. (bona isithombe)
8. Ibhokisi eliyindilinga: Isimo sebhokisi siyindilinga ngokuphelele noma siyisiyingi, futhi iningi lazo linokwakheka kwebhokisi lesembozo nebhokisi lekhava. (bona isithombe)
9.I-Hexagonal / octagonal / polygonal box: ibhokisi linezinhlangothi eziyisithupha futhi ikakhulu lakhiwe ngesivalo nesembozo. (bona isithombe)
10. Ibhokisi lokuvula amawindi: uhlangothi olulodwa noma ngaphezulu lwebhokisi kufanele livulwe, futhi i-PET esobala nezinye izinto kufanele zinamathiselwe ohlangothini lwangaphakathi, ukuze kuboniswe ngokuphelele imininingwane yokuqukethwe. (bona isithombe)
11. Ibhokisi lezinkuni elimsulwa: amabhokisi enziwe ngokhuni oluqinile, okusobala ukuthi ubukhulu bawo bupholishiwe ngopende, namanye amabhokisi enziwe ngokhuni olumsulwa ngaphandle kokufaka umbala. (bona isithombe)
12. Ibhokisi lokugoqa: ipuleti elimpunga njengamathambo, iphepha lobuciko elinephepha elihlanganisiwe noma elinye iphepha, egoba ipuleti elimpunga ukushiya isikhala sebanga elithile, lapho lisetshenziselwa ukuxhasa lonke libe ukwakheka okuthathu, ungaligoqa ngokukhululeka. (bona isithombe)
13.Ibhokisi le-Flip: yinhlanganisela yebhokisi lekhava nebhokisi lekhava bese ufaka isivalo somphetho nebhokisi lekhava eyisisekelo. Umehluko ukuthi ngemuva kwebhokisi kufakwe iphepha lezicubu, elingabuyiselwa emuva naphambili ngokukhululeka. (bona isithombe)
Langaphambilini Amabhokisi wesipho esenziwe ngokwezifiso e-logo eyenziwe ngokwezifiso ene-Ribbon
Olandelayo: Ikhofi eliphrintiwe ngokwezifiso lombala wekhofi elingu-350g ibhokisi langaphandle lebhokisi
isikhumba sokunakekelwa kwesikhumba nebhokisi lesembozo sephepha lesipho cosm ...
Ikhwalithi ephezulu alahlwayo ngokwezifiso popcorn ibhokisi / inkomishi / ...
Ephrintiwe Ilogo Cardboard Custom Cosmetics Makeup ...